Hamehana fahasalamana: manafaingana ny fomba fiasa ny Paositra Malagasy | NewsMada
Hamehana fahasalamana: manafaingana ny fomba fiasa ny Paositra Malagasy
Mitohy hatrany ny asan’ny Paositra Malagasy anatin’izao hamehana fahasalamana izao, ary vao mainka mihamafy aza. Nozarana fanafody CVO+ ny mpiasa rehetra, nisaoran’ny tale jeneraly, Ranarison Richard, sy ny minisitra Ramaherijaona Andriamanohisoa.
Ankoatra ny fanavaozana ny fomba fiasa amin’ny fampiharana ny teknolojia vaovao « digitalisation », manao ny Paositra amin’ny fizarana vatsim-pianarana any amin’ny oniversite manerana ny Nosy; eo ihany koa ny fizarana fisotroan-dronono ho an’ireo zokiolona, ny karaman’ny mpampianatra, sns. Manafaingana ny fomba fiasa avokoa izany, indrindra mampihena ny fivezivezena amin’izao hamehana fahasalamana izao.
Na eo aza ny fotoan-tsarotra noho ny antony fahasalamana, miroso hatrany amin’ny fanavaozana samihafa entina manatsara ny tolotra ny Paositra Malagasy. Iray amin’izany fanatsarana izany ny fanavaozana ny biraon’ny Paositra eo Antaninarenina, lehibe sy maoderina indrindra, ahitana tolotra isan-karazany ilain’ny mpanjifa amin’izao vanim-potoana izao. Ny « Paositra Money », ohatra, manafaingana sy manamora ny fifanakalozana. Eo ihany koa ny “Paositra Rapida”, manafaingana ny fandefasana entana manerana ny Nosy, tapak’andro na roa andro raha ela indrindra.
Nozarana CVO+ ny mpiasa
Tsy nitsahatra niasa ny Paositra Malagasy na niditra aza ny Covid-19 hatramin’ny herintaona. Mifanerasera amin’ny mponina izany ny mpiasa ao aminy sy tamin’ny fanampiana maro samihafa. Satria mbola mitohy ny asa, “ataon’ny fitondrana foibe ho vaindohan-draharaha ny fiarovana ny mpiasa sy ny ankohonany”, hoy ny tale jeneraly, Ranarison Richard. Koa omaly, notolorana CVO+ (gellule) ireo mpiasa rehetra manerana an’i Madagasikara, ary nomena fatra “familliale” ny fianakavian’izy ireo. Tanjona, afaka miasa ny mpiasa salama.